နားကလော်ဖို့ လိုရဲ့လား? – For her myanmar
Posted on March 7, 2019 Author Wathun	Comment(0)
နားကလော်ကြလား ယောင်းတို့? အရမ်းဇိမ်ရှိတာပေမဲ့ ဒါတွေတော့ သိထားဖို့ လိုပါတယ်နော်..
နားသန့်ရှင်းရေး အတွက်ဆို လူတချို့ကတော့ ဂွမ်းတံ (Q tip) နဲ့ လုပ်ပါလို့ ပြောကြပါလိမ့်မယ် ယောင်းတို့ရေ.. ဒါပေမဲ့ ဆရာဝန်တွေကို မေးကြည့်မယ်ဆို တစ်ညီတညွတ်တည်း ပြောကြမှာကတော့ နားထဲကို ဘာမှ မထည့်ဖို့ပါပဲ။ တကယ်ရော နားသန့်ရှင်းရေးလုပ်ပေးဖို့ လိုရဲ့လား? တကယ်တော့ နားမှာ သူကိုယ်တိုင် သန့်ရှင်းအောင် လုပ်နိုင်တဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေ ပါဝင်တဲ့အတွက် အထူးတလည် သန့်ရှင်းရေး လုပ်ပေးစရာ မလိုပါဘူးနော်.. လုပ်ချင်တယ်ဆို နားအပြင်ဘက်က နားဖာချေးတွေကို သန့်ရှင်းပေးရုံပဲ လုပ်နိုင်ပါတယ်…
ဒါဆို ဘာလို့ အလိုလို နားကလော်ချင်ရတာလဲ?
နားကလော်ဖို့ လိုအပ်တဲ့ ခံစားချက်ရတာက နားထဲမှာ Cerumen လို့ခေါ်တဲ့ နားဖာချေးတွေ ရှိလို့ပါ ယောင်းတို့ရေ။ နားဖာချေးတွေက နားအတွင်းကို ချောမွေ့စေပြီး ပြင်ပက ဝင်ရောက်လာတဲ့ ပိုးမွှားတွေ ဖုန်တွေကနေ အကာအကွယ် ပေးပါတယ်။ တကယ်လို့ နားဖာချေးသာ မရှိဘူးဆိုရင် နားတွေခြောက်သွေ့ ယားယံနေပါလိမ့်မယ်။ အစာစားတဲ့အခါမျိုးမှာ မေးရိုးလှုပ်ရှားမှုကြောင့် နားထဲမှာရှိတဲ့ ခြောက်နေတဲ့ နားဖာချေးတွေက အပြင်ကို ထွက်ကျပြီး နားကို သန့်ရှင်းစေပါတယ်။ နားဖာချေးဆိုတာမျိုးကလည်း နားရဲ့ အပြင်ဖက်နားမှာပဲ ဖြစ်တာပါ။ အတွင်းဖက်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။
Related Article >>> မျက်လုံးတစ်ဘက်တည်းမှ မျက်ရည်ပူကျခြင်း အကြောင်းရင်း
ဘာကြောင့် နားဖားချေး ပိတ်တယ်လို့ ခံစားရတာလဲ?
နားဖာချေး ပိတ်ဆို့ရခြင်း အကြောင်းအရင်းကတော့ ဂွမ်းတံနဲ့ နားကြပ်တဲ့အခါမှာ အပြင်ဘက်မှာ ရှိနေတဲ့ နားဖာချေးတွေကို အတွင်းဘက်ကို တွန်းပို့သလို ဖြစ်နေလို့ပါပဲ။ နားကို ချွန်ထက်တဲ့ အရာတွေနဲ့ ထိုးတာ ကလော်တာမျိုးလည်း မလုပ်သင့်ပါဘူး ယောင်းတို့ရေ… ပိုးဝင်တာမျိုး နားစည်ပေါက်တာမျိုးဖြစ်ပြီး အကြားအာရုံ ဆုံးရှုံးနိုင်ပါတယ်။ နားကလော်တာကို မပြုလုပ်တာက အကောင်းဆုံးပါပဲ။ တကယ်လို့ နားဖာချေး ပိတ်ဆို့တဲ့ ပုံစံမျိုး ဖြစ်လာပြီဆို တတ်ကျွမ်းတဲ့ ဆရာဝန်နဲ့ ပြသပြီး စစ်ဆေး ဖယ်ရှားသင့်ပါတယ်နော်..
နားဖာချေး ပိတ်ဆို့နေပြီလို့ ဘယ်လို သိနိုင်လဲ?
နားထဲမှာ တစ်ခုခု မြည်နေတယ်လို့ ခံစားရခြင်း
နားထဲကို တစ်ခုခုနဲ့ ဆို့ထားသလိုမျိုး ခံစားရခြင်း
ချောင်းဆိုးခြင်း စတာတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
နားဖာချေးပိတ်တာဟာ ရှားပါးတဲ့ ရောဂါဖြစ်ပေမဲ့ ဖြစ်တော့ ဖြစ်နိုင်တဲ့ ရောဂါပါ။ ဒီတော့ အထက်ပါလက္ခဏာမျိုး ကြုံတွေ့ရပြီဆိုရင် ဆရာဝန်နဲ့ သွားရောက်ပြသဖို့ လိုအပ်နေပါပြီ။
Related Article >>> မျက်စိစွံတာကိုသက်သာစေမယ့် အကောင်းဆုံးနည်းလမ်း(၈)သွယ်
နား သန့်ရှင်းရေးကို ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ?
တကယ်လို့ နားဖာချေး ပိတ်ဆို့သလို ခံစားရတယ်၊ ဒါပေမဲ့ ပြင်းပြင်းထန်ထန် မဟုတ်ရင် နားအတွင်းထဲ မဟုတ်ဘဲ အဝနားကိုပဲ အဝတ်စ သန့်သန့်နဲ့ သန့်ရှင်းရေး လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ Baby Oil ၊ Mineral Oil နဲ့ အလှဆီ(Glycerine) တို့ကိုလည်း နားထဲ အစက်အနည်းငယ် ထည့်ပြီး နားဖာချေးတွေကို ပျော့သွားအောင် လုပ်လို့ရပါတယ်။
ချွန်ထက်တဲ့ တုတ်တံတွေနဲ့ ဂွမ်းတံတွေအပြင် နားထဲကို မထည့်သင့်တဲ့ အရာတွေထဲက ပထမ တစ်ခုကတော့ ဟိုက်ဒရိုဂျင် ပါအောက်ဆိုဒ်- Hydrogen Peroxide ဖြစ်ပြီး သူက ရောဂါကို ပိုဆိုးစေပါတယ်။ နောက်တစ်ခုကတော့ နားကုသဖယောင်းတိုင်- Ear Candles ဖြစ်ပါတယ်။
သူက အခေါင်းပေါက်ပါတဲ့ ဖယောင်းတိုင်ကို နားအတွင်းစိုက် ကျန်တစ်ဖက်ကနေ မီးရှို့တဲ့ ကုသနည်းတစ်မျိုးပါ။ တွေ့ရှိချက်တွေ အရတော့ ဒီလို ကုသမှုဟာ ထိရောက်မှုမရှိသလို နားကျန်းမာရေးအတွက်ပါ အန္တရာယ်ရှိနိုင်ပါတယ်။
အားလုံးပဲ သတိရှိပြီး နားကို အရမ်း ကလော်တာမျိုး မလုပ်ကြပါနဲ့လို့ တိုက်တွန်းရင်း..
Dr.MTA (ကျန်းကျန်းမာမာ by Alinker)
Reference : webmd
နားကလျောကွလား ယောငျးတို့? အရမျးဇိမျရှိတာပမေဲ့ ဒါတှတေော့ သိထားဖို့ လိုပါတယျနျော..
နားသနျ့ရှငျးရေး အတှကျဆို လူတခြို့ကတော့ ဂှမျးတံ (Q tip) နဲ့ လုပျပါလို့ ပွောကွပါလိမျ့မယျ ယောငျးတို့ရေ.. ဒါပမေဲ့ ဆရာဝနျတှကေို မေးကွညျ့မယျဆို တဈညီတညှတျတညျး ပွောကွမှာကတော့ နားထဲကို ဘာမှ မထညျ့ဖို့ပါပဲ။ တကယျရော နားသနျ့ရှငျးရေးလုပျပေးဖို့ လိုရဲ့လား?
တကယျတော့ နားမှာ သူကိုယျတိုငျ သနျ့ရှငျးအောငျ လုပျနိုငျတဲ့ လုပျဆောငျခကျြတှေ ပါဝငျတဲ့အတှကျ အထူးတလညျ သနျ့ရှငျးရေး လုပျပေးစရာ မလိုပါဘူးနျော.. လုပျခငျြတယျဆို နားအပွငျဘကျက နားဖာခြေးတှကေို သနျ့ရှငျးပေးရုံပဲ လုပျနိုငျပါတယျ…
ဒါဆို ဘာလို့ အလိုလို နားကလျောခငျြရတာလဲ?
နားကလျောဖို့ လိုအပျတဲ့ ခံစားခကျြရတာက နားထဲမှာ Cerumen လို့ချေါတဲ့ နားဖာခြေးတှေ ရှိလို့ပါ ယောငျးတို့ရေ။ နားဖာခြေးတှကေ နားအတှငျးကို ခြောမှစေ့ပွေီး ပွငျပက ဝငျရောကျလာတဲ့ ပိုးမှားတှေ ဖုနျတှကေနေ အကာအကှယျ ပေးပါတယျ။ တကယျလို့ နားဖာခြေးသာ မရှိဘူးဆိုရငျ နားတှခွေောကျသှေ့ ယားယံနပေါလိမျ့မယျ။ အစာစားတဲ့အခါမြိုးမှာ မေးရိုးလှုပျရှားမှုကွောငျ့ နားထဲမှာရှိတဲ့ ခွောကျနတေဲ့ နားဖာခြေးတှကေ အပွငျကို ထှကျကပြွီး နားကို သနျ့ရှငျးစပေါတယျ။ နားဖာခြေးဆိုတာမြိုးကလညျး နားရဲ့ အပွငျဖကျနားမှာပဲ ဖွဈတာပါ။ အတှငျးဖကျမှာ မဟုတျပါဘူး။
Related Article >>> မကျြလုံးတဈဘကျတညျးမှ မကျြရညျပူကခြွငျး အကွောငျးရငျး
ဘာကွောငျ့ နားဖားခြေး ပိတျတယျလို့ ခံစားရတာလဲ?
နားဖာခြေး ပိတျဆို့ရခွငျး အကွောငျးအရငျးကတော့ ဂှမျးတံနဲ့ နားကွပျတဲ့အခါမှာ အပွငျဘကျမှာ ရှိနတေဲ့ နားဖာခြေးတှကေို အတှငျးဘကျကို တှနျးပို့သလို ဖွဈနလေို့ပါပဲ။ နားကို ခြှနျထကျတဲ့ အရာတှနေဲ့ ထိုးတာ ကလျောတာမြိုးလညျး မလုပျသငျ့ပါဘူး ယောငျးတို့ရေ… ပိုးဝငျတာမြိုး ၊နားစညျပေါကျတာမြိုးဖွဈပွီး အကွားအာရုံ ဆုံးရှုံးနိုငျပါတယျ။
နားကလျောတာကို မပွုလုပျတာက အကောငျးဆုံးပါပဲ။ တကယျလို့ နားဖာခြေး ပိတျဆို့တဲ့ ပုံစံမြိုး ဖွဈလာပွီဆို တတျကြှမျးတဲ့ ဆရာဝနျနဲ့ ပွသပွီး စဈဆေး ဖယျရှားသငျ့ပါတယျနျော..
နားဖာခြေး ပိတျဆို့နပွေီလို့ ဘယျလို သိနိုငျလဲ?
နားထဲမှာ တဈခုခု မွညျနတေယျလို့ ခံစားရခွငျး
နားထဲကို တဈခုခုနဲ့ ဆို့ထားသလိုမြိုး ခံစားရခွငျး
ခြောငျးဆိုးခွငျး စတာတှေ ဖွဈပါတယျ။
နားဖာခြေးပိတျတာဟာ ရှားပါးတဲ့ ရောဂါဖွဈပမေဲ့ ဖွဈတော့ ဖွဈနိုငျတဲ့ ရောဂါပါ။ ဒီတော့ အထကျပါလက်ခဏာမြိုး ကွုံတှရေ့ပွီဆိုရငျ ဆရာဝနျနဲ့ သှားရောကျပွသဖို့ လိုအပျနပေါပွီ။
Related Article >>> မကျြစိစှံတာကိုသကျသာစမေယျ့ အကောငျးဆုံးနညျးလမျး(၈)သှယျ
နား သနျ့ရှငျးရေးကို ဘယျလိုလုပျကွမလဲ?
တကယျလို့ နားဖာခြေး ပိတျဆို့သလို ခံစားရတယျ၊ ဒါပမေဲ့ ပွငျးပွငျးထနျထနျ မဟုတျရငျ နားအတှငျးထဲ မဟုတျဘဲ အဝနားကိုပဲ အဝတျစ သနျ့သနျ့နဲ့ သနျ့ရှငျးရေး လုပျပေးနိုငျပါတယျ။ Baby Oil ၊ Mineral Oil နဲ့ အလှဆီ(Glycerine) တို့ကိုလညျး နားထဲ အစကျအနညျးငယျ ထညျ့ပွီး နားဖာခြေးတှကေို ပြော့သှားအောငျ လုပျလို့ရပါတယျ။
ခြှနျထကျတဲ့ တုတျတံတှနေဲ့ ဂှမျးတံတှအေပွငျ နားထဲကို မထညျ့သငျ့တဲ့ အရာတှထေဲက ပထမ တဈခုကတော့ ဟိုကျဒရိုဂငျြ ပါအောကျဆိုဒျ- Hydrogen Peroxide ဖွဈပွီး သူက ရောဂါကို ပိုဆိုးစပေါတယျ။
နောကျတဈခုကတော့ နားကုသဖယောငျးတိုငျ- Ear Candles ဖွဈပါတယျ။ သူက အခေါငျးပေါကျပါတဲ့ ဖယောငျးတိုငျကို နားအတှငျးစိုကျ ကနျြတဈဖကျကနေ မီးရှို့တဲ့ ကုသနညျးတဈမြိုးပါ။ တှရှေိ့ခကျြတှေ အရတော့ ဒီလို ကုသမှုဟာ ထိရောကျမှုမရှိသလို နားကနျြးမာရေးအတှကျပါ အန်တရာယျရှိနိုငျပါတယျ။
အားလုံးပဲ သတိရှိပွီး နားကို အရမျး ကလျောတာမြိုး မလုပျကွပါနဲ့လို့ တိုကျတှနျးရငျး..
Dr.MTA (ကနျြးကနျြးမာမာ by Alinker)
Tagged dangerous, ear, earwax, Health, Itch, Suitable, wax
နာမည်ရင်းတွေ ဘာတွေထက် Potterhead တစ်ယောက်ပါ။ အဲ့လို မှော်လောကတွေ၊ အလှအပကလွဲပြီး ကျန်တဲ့အရာတွေ အားလုံးကို စိတ်ဝင်စားလို့ ဆောင်းပါးတွေထဲ မှော်တွေ၊ magical creatures တွေပါလာရင်တော့ တခြားသူမတွေးပါနဲ့ ကျွန်မပါပဲလို့... :*
ဒီအကြောင်းရင်း (၁၂)ခု ရှိနေရင် သွေး မလှူပါနဲ့။
Posted on April 12, 2019 April 12, 2019 Author For Her Myanmar
စေတနာဇောနဲ့ မမှားကြစေဖို့ ဒါလေးကိုတော့ ဖတ်ထားဖို့ လိုမယ် ယောင်းတို့ရေ…
အိပ်မက်ကပြောနေတဲ့ ယောင်းယောင်းတို့ရဲ့ ကျန်းမာရေး
Posted on May 28, 2018 July 25, 2018 Author Bori
သြော်… ဒီအိပ်မက်တွေက ဒါတွေကို ပြောနေတာကိုး…
Posted on November 9, 2016 Author
ယနေ့အခါ အိပ်ရေးပျက်ခြင်းပြသနာများ ပိုမိုအတွေ့များလာရသည်။ အလုပ်ဒဏ်ပိနေခြင်း၊ ကျောင်းစာများ နှင့် အချိန်ကုန်နေရခြင်း၊ ညဉ့်နက်အထိ ဖုန်း၊ ကွန်ပြူတာများအပေါ် အချိန်ကုန်စေခြင်းကြောင့် အိပ်ချိန်များ သိသိသာသာလျော့နည်းသွားသည်။ ထို့ကြောင့် အိပ်ခြင်းနှင့်ပတ်သတ်သည့် နောက်ဆက်တွဲ ပြသနာများကို သိရှိ၍မိမိကျန်းမာရေးကို ပိုမိုဂရုစိုက်နိုင်စေရန် ဖော်ပြလိုက်ပါသည်။ (၁) မတော်တဆမှုများပိုမို ဖြစ်လာနိုင်ခြေရှိ အလုပ်ခွင်တွင်ဖြစ်စေ၊ ကားမောင်ရာတွင်ဖြစ်စေ အိပ်ရေးမဝပါက ကြီးမားသောပြသနာများဖြစ်လာနိုင်သည်။ အထူးသဖြင့် ကားတိုက်မှုအများစုသည် ယာဉ်မောင်း၏ဂရုမစိုက်မှုကြောင့်သာမကပဲ အိပ်ရေးမဝပဲ အာရုံမစိုက်ခြင်းကြောင့်သာ အဓိကတရားခံဖြစ်နေသည်။ (၂) သင့်ကို ထုံထိုင်းနုံချာစေသည်။ အိပ်ခြင်းသည် လေ့လာမှုနှင့် တွေးခေါ်မှုတို့၏ အရင်းအမြစ်ဖြစ်သည်။ အိပ်ချိန်မလုံလောက်ခြင်းသည် မှတ်ဉာဏ်ကိုများစွာထိခိုက်စေသည်။ ပင်ပန်းခြင်း၊ လေးလံထုံမှိုင်းခြင်း၊ စိတ်ဖိစီးမှုများခြင်း၊ စိုးရိမ်ကြောင့်ကြခြင်းတို့သည် အိပ်ရေးပျက်ခြင်း၏ နောက်ဆက်တွဲ ဆိုးကျိုးဖြစ်သည်။ (၃) ဆိုးရွားသောကျန်းမာရေးပြသနာများဖြစ်လာနိုင်သည်။ နာတာရှည်အိပ်ရေးပျက်ခြင်းကြောင့် နှလုံးရောဂါ၊ နှလုံးခုန်နှုန်းမူမမှန်ခြင်း၊ သွေးတို့ရောဂါ၊ […]
ပုရိသတို့ FA ဘဝမှ လွတ်မြောက်အောင် လုပ်နည်း..
Comedyနဲ့ Drama အရသာကို အပြည့်အဝ ခံစားရစေမယ့် Friendzone ရုပ်ရှင်